Best ZirconiaSlidePlate, Mhete (PMDQuality) Mugadziri uye Fekitori | FunMeet
Zirconia Lip brickin girazi ...
Metal Powder / Ti Series Poda ...
ZirconiaSlidePlate, Mhete (PMDQuality)
Pamusoro pe PMO1 akateedzana e Zro2 macomputer ceramic zvigadzirwa, kuburikidza nekuenderera mberi kwakakosha tekinoroji yekugadzirisa, Fangming Nyowani Zvinyorwa zvakabudirira R & D, yakaburitsa PMD akateedzana epamusoro ekuita Zro2 inoumba zvedongo Slide Plate, Mhete, Isa. Ivo vane yakachena kuchena, kupwanya kwakasimba, kukukurwa kwevhu, kupisa kwekushisa kunodzivirira, kwakakwirira kupfeka kuramba, hupenyu hwakareba hwekushanda. Hupenyu hwavo hwekufunga hunosimudzwa ne30-50% zvichibva pa PMO1 nhevedzano yezvigadzirwa panguva imwechete yekushanda.
PMD Series Zro2 Composite Ceramic Slide Plate, Zro2 Mhete, Isa
Kubatanidzwa kweRamad data pamwe nehemogogravimetric ongororo (TGA) mhedzisiro inoratidza kuti kubatanidzwa kwema organic macromolecule munzvimbo dzekramiki kunoitika. Dynamic mechanical mechanical analysis (DMA) yakaitwa kubva pa100 kusvika + 50 ° C; kuwedzerwa kweiyo ceramic kunowedzera iyo modulus 'yekuchengetedza, zvakanyanya kune iyo yakagadziridzwa kuzadza. Inofananidzwa nePP uye thermoplastic vulcanizate (TPV), kuwedzera kwakapisa kwemafuta kunoonekwa mushure mekuwedzera kweye zvedongo kuzadza, mhedzisiro yekugadzirwa kweakawanda evhoriyamu yemahara. Iyo tensile modulus yemakomisheni iri ingangoita 1.2 nguva yeiyo yakachena TPV, kuwedzera mukuomarara kunonyatso kukonzerwa neceramic. Kutsemuka huso kunoratidza kushomeka kwekubatana kwemafiller particles kumatrix. Mune sampuro ine yakagadziriswa mafirita iyo tensile deformation iri kuenda kuburikidza nepolymer matrix.
Ceramic composite inokwanisa kutsigira tembiricha inopfuura 2200 F pane yakadzokororwa pasina kutsemuka nekuda kwekuvhunduka. Iyo inoumbwa ine webhu yekusimbisa tambo; uye chizvaro chakanyanya padandemutande mushure medanho repfuti. Iyo matrix inoumbwa yakatenderedza webhu nekuisa mushonga pawebhu ne sol ine alumina uye, mune dzimwe nguva, isingawanzo pasi oxides, uye kupfura iyo yakasanganiswa mushure mekuisirwa. Iyo dandemutande inogona kunge iri matatu-mativi orthogonal kurukiswa kweiyo inosimbisa tambo, uko iyo tambo iri echinjana chikamu alumina. Iyo inoumbwa iri yemahara yeBoka I uye Boka II simbi uye shanduko yesimbi oxides. Iyo inoumbwa inogona kushandiswa sechinhu chinokanganisa zvidhinha kana lining uye inogona zvakare kushandiswa seyakavharidzira zvinhu nekuda kwemakemikari ayo asiri-anoshanda maitiro.
Pashure: ZirconiaSlidePlate, Mhete (PM01Quality)
Zirconia Ceramic Mhete
Zirconia Zirconia Mhete
Zirconia metering Nozzle (PMO1 Hunhu）
ZirconiaSlidePlate, Mhete (PM01Quality)